RELIGIOUS Archives - SANTHITSA
ပါခြုပျဆရာတျောဘုရားကွီးရဲ့ လာဘျ၊ ကံကောငျးအောငျ ပွုမှုနထေိုငျနညျးတရားတျော… လောကမှာ ကံမကောငျးဘူးဆိုရငျ ကံကောငျးအောငျက ဘာလုပျရမှာလဲ၊ မကောငျးတဲ့ ကံတှေ ပပြောကျအောငျ ကံကောငျးတဲ့ နညျးတှေ မရှိဘူးလားဆို ရှိတယျ။ အကုသိုလျအကြိုးတှေ ဝငျရောကျ ဖွဈပျေါနတောကို လူတှကေ ကံမကောငျးဘူးလို့ ပွောတာ။ အကုသိုလျရဲ့ အကြိုးတရားတှကေ ကိုယျ့သန်တာနျရောကျပွီ၊ ထိခိုကျနပွေီဆိုရငျ ဒါက ကံမကောငျးဘူးလို့ ပွောကွတယျ။ အဲဒီ အခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့လုပျရပျကို ပွနျဆနျးစဈကွညျ့ ရမယျ။ ငါတို့လုပျနတော အမှားမရှိဘူး၊ အကောငျးတှေ လုပျတယျ။ သို့သျော အတိတျတုနျးက မှားယှငျးမှုတှကေလညျး လူတှရေဲ့သန်တာနျ လာရောကျပွီး အကြိုးပေးနတောတှေ ရှိတတျ တယျပေါ့။ အဲဒီလို ဖွဈပျေါ လာတာမြိုးတှကေော မရှိနိုငျဘူးလားဆို ရှိနိုငျတယျ။ …
အိမ် အောက်ထပ်၌ ဘုရားခန်း ထား၍ ကိုးကွယ်လျှင် သင့်/မသင့် ”
“ အိမ် အောက်ထပ်၌ ဘုရားခန်း ထား၍ ကိုးကွယ်လျှင် သင့်/မသင့် ” “ မေး ” “ အောက်ထပ် ” အိမ်ထောင်စု များ၌ ဘုရားခန်း ထား၍ ကိုးကွယ်ရာ “ အပေါ်ထပ် ” အိမ်ထောင်စု တို့၏ အောက်မှာ ဖြစ်နေတတ်၍ “ ဘုရားခန်း ”၏ အပေါ်၌ သွားလာ နေထိုင်သူ များ၌ အပြစ် ရှိ ပါ သ လား ? (သို့မဟုတ်) “ အောက်ထပ် ” ၌ “ ဘုရားခန်း ”ထားသူ များမှာ အပြစ် ရှိ …
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူများ ပြုသင့်တဲ့ ကုသိုလ် အရှင်ဘုရားဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ဆေးဖိုးဝါးခ မတတ်နိုင်သူများ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင် စားဝတ်နေရေးပါ ဒုက္ခရောက်ရသူများ ဘယ်လို ကုသိုလ်မျိုး ပြုသင့်ပါသလဲဘုရား။ အဲ ဒီ လို အ ခြေ အ နေ မျိုး မှာ လုပ် နိုင် တဲ့ ကု သိုလ် မျိုး ကို လုပ် ဖို့ လို ပါ တယ်။ ဗု ဒ္ဓ စာ ပေ မှာ ပုညကြိယဝတ္တုဆယ်မျိုး (ကောင်းသောအကျိုး၏ တည်ရာဖြစ်၍ ပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဆယ်မျိုး) ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီဆယ်မျိုးကတော့… ၁။ ဒါန = …
ရုပ်အဆင်း လှပစေသော ကုသိုလ် (၄) မျိုး လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ ဖြစ်လေရာ ဘဝတို့တွင် သူတစ်ပါးထက် ရုပ်အဆင်း လှပ လိုသူတို့သည် ကောင်းမှု ( ၄ ) ပါး ကိုပြုကြရမည် ဟု ကျမ်းဂန်တို့ ၌ ဆိုကြ၏ ။ ထိုကောင်းမှု ( ၄ ) ခုသည်ကား…… ၁။ အဝတ်အစား , သင်္ကန်း လှူဒါန်းခြင်း ၂။ အစာအဟာရ လှူဒါန်းခြင်း ၃။ ဒေါသကို ချုပ်တည်း၍ မေတ္တာပွားခြင်း ၄။ တံမြတ်လှည်းခြင်း ဤ( ၄)ပါးသည် ရုပ်အဆင်းလှပခြင်း၏အကြောင်းရင်း ဖြစ်လေ၏ ။ ထိုကုသိုလ်( …
မွဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့ သဈပငျကွီးလညျး မလဲစနေဲ့ ထုံးအိုးကွီးလညျး မကှဲစနေဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကွီး သုံးခှနျး အဓိပ်ပါယျ…
မွဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့ သဈပငျကွီးလညျး မလဲစနေဲ့ ထုံးအိုးကွီးလညျး မကှဲစနေဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကွီး သုံးခှနျး အဓိပ်ပါယျ… ရှစေကားကွီး သုံးခှနျး ၁ ။ မွဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့ ၂ ။ သဈပငျကွီးလညျး မလဲစနေဲ့ ၃ ။ ထုံးအိုးကွီးလညျး မကှဲစနေဲ့ ကွားတော့ ကွားဖူး၏ သို့သျော တှငျတှငျ ကယျြကယျြ သိသူတော့ ရှား၏ မွဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့ မွဈကွီးလညျး မခမျးပါစနေဲ့ ဆိုတာ ကွညျလငျ အေးမွတဲ့ တသှငျသှငျ စီးဆငျးနတေဲ့ မွဈကွီးနဲ့ တူတဲ့ … မတ်ေတာတရားမြား လူသားတှမှော မခမျးခွောကျပါစနေဲ့ .. လို့. ဆိုလိုခွငျးဖွဈ၏ ၊ …